Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): စစ်သည်အများအပြား တပ်မှ ထွက်ပြေး
SHANA SHABRA NDAU AI LAM (140)
စစ်သည်အများအပြား တပ်မှ ထွက်ပြေး
at 11/29/2013 10:24:00 PM
Aung Sanmt shared Lachid Kachin's photo.
ကဲ ကြည့်အမြင်မှန်၇ပြီး စစ်မတိုက်ချင်တဲ့သူတွေကြတော့ ဂိုဏ်းချုပ်တွေရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးကြရပြီပေါ့....
အစိုးရတပ် အရာရှိ စစ်သည်အများအပြား တပ်မှ ထွက်ပြေး ================================ ( သျှမ်းသံတော်ဆင့်) သျှမ်းပြည်အတွင်းရောက်ရှိလှုပ်ရှားနေသည့် တပ်များမှ အရာရှိ စစ်သည်အများအပြား တပ်မှ ထွက်ပြေးနေသည်ဟု ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရသိရပါသည်။ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA မှ ရရှိထားသည့် သတင်းအရ အစိုးရတပ်မတော် ဗိုလ်ကြီးအဆင့် ၄ ဦး တပ်သားအဆင့် ၃ ဦး - စုစုပေါင်း ၇ ဦးထက်မနည်း တပ်မှ ထွက်ပြေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။ အစိုးရတပ်များ သျှမ်းပြည်အတွင်း တာဝန်ကျ လှုပ်ရှားပြီး အပစ်ရပ်ထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအား တိုက်ခိုက်နေရသောကြောင့် တပ်မှထွက်ပြေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးသင်တန်းတက် ရောက်နေသည့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြော ပြပါသည်။ “လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ တော်တော်များများကအပစ်ရပ်ထားပြီ၊ ဒါပေမယ့် တိုက်ဖို့ နယ်မြေ ရှင်းလင်းဖို့အမိန့်က လာတုန်း၊ ဘယ်သူမှ အလကား မသေချင်ဘူးလေ။ ဒါ့ကြောင့် ထွက်ပြေးကြတာ” - ဟု RCSS/SSA နာယက ဆရာ ခွန်းဆေ က ပြောပါသည်။ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA ပိုင် သတင်း ဝဲပ်ဆိုက်တွင်လည်း ထွက်ပြေးသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အရာရှိများ တပ်သားများ၏ နာမည်များကိုပါ ဖေါ်ပြထားသည်။ အဆိုပါ တပ်ပြေးများမှာ ခလရ ၁၃၂ မှ ဗိုလ်ကြီး အောင်အောင်၊ တပ်သားသန့်ထူး၊ ခမရ ၃၄၂ မှ ဗိုလ်ကြီးသက်နိုင်ဦး၊ ခမရ ၄၃၆ မှ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး၊ ဆေးတပ်ရင်းဗိုလ်ကြီး သိန်းထိုက်အောင်၊ ၁၄၄ မှ တပ်သားအောင်စိုးဝင်း၊ ၂၉၀ မှ တပ်သားဇော်ဝင်း တို့ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယခုလဆန်းပိုင်းကလည်း တပ်သားတဦးက ရှေ့တန်းပွိုင့်ဦး မထိုးလိုသောကြောင့် နမ္မတူမြို့နယ် မိုင်းယင်အုပ်စု ဝမ့်ကောင်းဟုန်း(ရွာ) တွင် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခဲ့မှုလည်း ရှိပါသည်။
6 Years resumed war in Kachin region
Hkun Li 's post .
ချောင်းဆုံနဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ကို သွယ်တန်းထားသော တံတားကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမည်ပေးမယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် မွန်လူမျိုးများ မော်လမြိုင်မြို့မှာ ဆန္ဒပြနေ
https://www.facebook.com/rfaburmese/videos/10155647127368128/ BREAKING NEWS! ချောင်းဆုံနဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ကို သွယ်တန်းထားသော တံတားကို ဗိုလ...
Laiza TV Shiga
Laiza TV Shiga. Apri 2, 2017 credit-www.kachinnet.net
Kachin Alliance galaw nga ai projects/programs nialam
YUP Kalang hprang
တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေ ရမှ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ...
Jinghpaw ni Yangung mare htim na
ဘယ်လို လုပ် ရင်ချမ်းသာ မှာ လည်း.
NINGSIN KATA KAW NYAU CHYANG TAM AI HPA
မန်ဝိန်းကြီးကျေးရွာ၊ မန်စီမြို့နယ် အား အချိန်မရွေး...
Namlimpa news Updates
LARU RU WA NA?( Storm Is Coming )
လက်ရှိဆွေးနွေးပွဲဟာ MPC တို့ရဲ့ သွေးတိုးစမ်းဆွေးနေ...
TO CHANGE EFFECT DEMOCRATIC TRANSACTION OF THE BUR...
Laiza Conference Daw ( II )
KRC Malaysia, hpung masha ni hpang de shana dat ga...
Interview Kachin Politics Watch Group (KPWG)
KIA, ရဲဘော်များ လက်နက်ကြီးပစ် လေ့ကျင့် နေစဉ်
ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ချင်းမိုင် လေဆိပ် တွင် ဗိုချုပ်ဂွမ်...
Kachin Online Radio LAIZA FM ( LAIZA FM ကိုအွန်လို...
Myit ru ai
FB- ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ
သူရိယျနေဝန်းဂျာနယ်မှဦးမိုးဟိန်းနှင့်အင်တာဗျုး ( v...
တိုင်းပြည်တပြည်ကို balance ဖြစ်စေဖို့ activist မျာ...
Laksan Majan Shiga
UN calls for immediate end to new Kachin clashes
Urgent Release: Humanitarian Situation Update for ...
KIO deputy military chief in Yangon meets with pre...
သက်ဆိုင်သူများ ကြားပါစေ။ အဖွား၏ ဆုတောင်းသံကို ဘုရာ...
Tsawra hkungga ai, hkawp myitrum manang ni hpang...
The Sawbwa and Mahadevi of Hsipaw arriving at St J...
Who are Kachin? Where You From ?Documentary Film (...
Kachin Press Conference ( Yangon -Burma )
No peace without ethnic rights in Myanmar
အာဏာပိုင်များက အစွမ်းကုန် ရက်စက်ယုတ်မာနေကြပါပြီ။
Fighting continued In Kachinland ( Northern burma-...
KIO, ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန် နှင့်DVB တွေ့ဆုံ...
Myanmar-China-US: The potential for triangular coo...
ခန္တီပါရမီ (The Perfection of Tolerance)
နိုင်ငံက ငယ်ငယ် တိုင်းရင်းသားက များများ
ဦးအောင်ကျော်ဇော်နှင့် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး၊ ပြည်တွင...
LAWAN LU AI RAM LAWAN RA
DVB -ကေအိုင်အေ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော...
Myanmar: Aung San Suu Kyi, Complicity with Tyranny...
Marit maroi Hugawng marit shing ran mahkawn
Miwa mung na Jinghpaw wunpawng myusha niachyeju ...
တရုတ်အစိုးရမှ ရန်ကုန်မြို့ရှိတရုတ်သံရုံးသို့ ဦးသန...
Majan gaw shakri hkat ding yang
ဂျပန်အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ (PCG-ကချင်ငြိမ်းချမ်းေ...
Burma Army Attacks Kachin Villagers; Rapes of 15-Y...
Nau chye Naulai Hpyau ai Ni
An htealamu ga ( Music Zaulai )
Laiza Conference Daw ( I )
MYU HTE MUNGDAN A MATU YA N GALAW YANG GALOI GALAW...
RFA-မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲ အဖြေမရှိဘဲ ပြီးဆုံး
ကုလ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) မှ ...
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများမှ KIO, နှင့် UNFC ခေါင်းဆော...
Myit yu ga “Daw” (3/Matut)
KIO ,UNFC , UN ကိုယ်စားလှယ်များ မြစ်ကြီးနားသို့ ရေ...
President of United to End Genocide
“နိုင်ငံရေးဆိုတာ သွေးမထွက်တဲ့စစ် ဖြစ်ပြီး စစ်ဆိုတာ...
တပ်မတော်ကို အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်မှုအောက် မှာထားရှိရေး...
Laiza Ethnic Armed Organizations Conference Statem...
လိုင်ဇာညီလာခံမှာတော့ အမှားမခံ တော့ဘူးလို့ ဗိုလ်မှူ...
USA ရောက် ကချင်အမျိုးသားများ၏ ၀ါရှင်တန်သံရုံးရှေ့ ...
အမေရိကန်ကချင်များ ဝါရှင်တန်ဒီစီ မြန်မာသံရုံးရှေ့မ...
ကချင်နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ် က Samson Hkalam နဲ့ VOA အ...
ABSDF 25th Anniversary
Demonstration to end War against Civillians in kac...